Caruurta oo 'hurdo yari ka qaada isticmaalka' telefoonada caqiilka - BBC News Somali
Caruurta waqtiga badan galiya isticmaalka telefoonadda caqiilka ah iyo aaladaha kale Tablet-ka ayaa u muuqda in xooggaa ka hurdo yar yihiin kuwa kale ee aan sidaa sameyn, waxaa sidaasi xaqiijiiyey cilmibaarayaal.
Daraasadda ayaa waxaa si gaar ah loogu sheegay soo jeedinta ku aadan in hal saac kasta oo ilmuhu isticmaalaan aaladaha farta loo adeegsado marka la isticmaalayo ee loo yaqaan (touchscreens) 15 daqiiqo oo hurdo yari ah.
S kastaba ha ahaatee, kuwa ka cayaara aaladahaas ayey si deg deg aa habka shaqeynta maskaxdooddu aad u sareysaa.
Xeeldheerayaashu waxay leeyihiin daraasadan waa "muhiim" laakiin waxaa loo baahan yahay innaanay walwal muujin waalidiintu.
Daraasadda oo ay samaysay Jaamacadda Birkbeck ee magaalada London ayaa waxaa su'aalo la waydiiyey 715 waalidiin haysta caruur da'doodu sadex sano ka yar tahay.
Waxaa la waydiiyey badiyaa sida caruurtoodu ugu ciyaaraan teleefoonadda caqiilka ah iyo aaladaha kale ayna u saameyso hannaanka hurdadooda.
Jawaabaha ayaa muujiyey in 75% caruurta isticmaala aaladaha casriga ah maalin kasta kuwaasi oo 51% lix ilaa 11 bilood mid ka mid ah aaladahaas isticmaalaan, halka 92% kuwaasi ka mid ah 25 iyo 26 bilood sidoo kale adeegsadaan.
Laakiin caruurtaas kuwa ku ciyaara aaladaha casriga ah sida telefoonada caqiilka ah ayaa habeenkii hurdadu ku yar tahay, balse ay ku badan tahay maalinkii.
Dr Tim Smith, oo ka mid ah cilmibaarayaashan ayaa u sheegay BBC "Ma ahan wax wayn, marka aad seexanayo 10 ilaa 12 saac maalinkii guud ahaan, laakiin daqiiqad kasta muhiimad ayay u leedahay hurdadu da'da koraysa ee yaraan".